Ịkwanyere ntekwasa Gabion ntupu - China Hebei Samsung Metal waya ntupu
Ịkwanyere ntekwasa Gabion ntupu
Ihe nke ịkwanyere ntekwasa gabion ịkwanyere ntekwasa gabions, a ụdị izipu ntupu igbe, na-mere nke arọ hexagonal waya netting na kpara site metal waya. Ịkwanyere ntekwasa gabions n'èzí n'obosara bụ site 3.0mm na 4.5mm, na dayameta nke rim waya ma ọ bụ ihu waya bụ otu waya nlele thicker karịa nkịtị ntupu waya. Ịkwanyere ntekwasa gabions na-mere nke plastic ntekwasa galvanized ígwè waya: elu àgwà ala carbon ígwè waya, anyị kechie ịkwanyere nchedo oyi akwa n'elu galvanized ígwè waya, wee kpaa ya ...
Min.Order ibu: 10 Set / È
Tụkwasịnụ Ikike: 500 Set / È kwa Day
Ihe nke ịkwanyere ntekwasa gabion
ịkwanyere ntekwasa gabions , a ụdị izipu ntupu igbe, na-mere nke arọ hexagonal waya netting na kpara site metal waya. Ịkwanyere ntekwasa gabions n'èzí n'obosara bụ site 3.0mm na 4.5mm, na dayameta nke rim waya ma ọ bụ ihu waya bụ otu waya nlele thicker karịa nkịtị ntupu waya.
ịkwanyere ntekwasa gabions na-mere nke plastic ntekwasa galvanized ígwè waya: elu àgwà ala carbon ígwè waya, anyị kechie ịkwanyere nchedo oyi akwa n'elu galvanized ígwè waya, wee kpaa ya n'ime hexagonal waya netting gụnyere ihe nile nkọwa. Nke a ịkwanyere nchedo oyi akwa pụrụ iwusi ndị nchedo elu mmetọ gburugburu ebe obibi. Ka ọ dịgodị, anyị pụrụ ịhọrọ dị iche iche na agba iji kwekọọ ya gburugburu na gburugburu ebe obibi.
The nkịtị nkọwa maka ịkwanyere ntekwasa gabion
Abụkarị n'obosara bụ site 2.5mm na 3.4mm
Size nke gabion
Ọzọ nkọwa si ahịa ndị dịnụ.
Ngwa nke ịkwanyere ntekwasa gabions
Gabions na-eji ọtụtụ ihe gụnyere stabilization nke ụwa ije na ozize, osimiri akara, ọdọ, kanaal refurbishment, landscaping na retaining mgbidi, wdg
Atụmatụ na uru nke ịkwanyere ntekwasa gabions
ịkwanyere ntekwasa gabions pụrụ idi ike Ikuku na extruding ike na na-na ya udi. Gabions ndị mfe iji wụnye na enweghị ahụmahụ dị mkpa iji nweta a eti utịp. Ịkwanyere ntekwasa n'èzí galvanized ígwè waya, ịkwanyere ntekwasa gaions bụ mma na corrosion resistence, antioxidation, anwụ ngwa ngwa, n'otu oge ịkwanyere ntekwasa gabion bụ maa mma karịa ndị na-abụghị ịkwanyere ntekwasa. Anyị nwere ike dakọtara ya gburugburu ebe obibi na-eme ka ndị ọzọ mfe.
Previous: Galvanized Gabion ntupu
Osote: U Type Waya
Kpaliri welded Gabion ntupu
Galvanized Gabion ntupu